Avalon 78 Casino Dib u eegis 2021 | Voordeelcasino.com
Bogga ugu weyn » Avalon 78 Casino
Booqasho Avalon 78 Casino
Avalon 78 Casino Dib u eeg 2021
Sidii aad nooga barteen, waxaan ku bilaabaynaa dib-u-eegistayada hordhac yar oo ku saabsan casino-ka qadka ku habboon. Shinida Avalon 78 Casino waxaan jeclaan lahaa inaan waxyar kaaga sheegno magaca iyo qaabka loo yaqaan casino. Isla marka aad booqato Avalon 78 waxaad heleysaa fikrad ah inaad dib ugu noqoneyso waqtiga. Maahan in casino online-ka uu yahay mid duug ah, laakiin qaabku runtii wuxuu ina xusuusinayaa xilligii Celtic, halkaasoo quraafaadyo waaweyni ka yimaadeen. Avalon sidoo kale waa jasiirad mala awaal ah oo ku taal biyaha Ingiriiska, halkaas oo la sheego in ay ku sugnaayeen sheekooyin iyo shakhsiyaad kale oo mala awaal ah. Uguyaraan taasi waa waxa bogga wikipedia noo sheegay.
Hadda dib ugu noqo khamaarka internetka. Hal dhinac ama mid kale waxaan u maleyneynaa inay leedahay muuqaal adag oo adag, laakiin tani sidoo kale waxay noqon kartaa maxaa yeelay waxaan u maleyneynaa filimada sida Gladiator iyo Braveheart inay yihiin kuwo aad u qabow. Dib-u-eegidgan waxaan bixin doonaa fiiro badan oo lagu kalsoonaan karo Avalon 78 Casino, xulashada ciyaarta, gunooyinka iyo amniga.
Xulashada ciyaarta ee Avalon 78 Casino
Isla markii aan booqannay Avalon 78 markii ugu horreysay, waxaan isla markiiba aragnay in khadka tooska ah ee khadka tooska ah uusan ku badbaadin xulashada ciyaarta. Waxaad ka heli doontaa waxyaabo badan oo fiidiyow ah, khamaar toos ah oo toos ah, ciyaaraha jackpot, ciyaaraha miiska iyo boosaska caadiga ah. Xulashada ugu weyn dabcan waxaa laga heli karaa boosaska fiidiyowga. Muuqaal fiican oo ka mid ah Avalon 78 Casino waa inaad ku kala shaandheyn kartaa qayb ahaan iyo adeeg bixiye. Haddii aad horeyba u ogayd isla markiiba ciyaarta aad rabto inaad ciyaarto, waad ku geli kartaa baarka raadinta ciyaarta ayaa isla markiiba soo muuqan doonta.
Isugeyn Avalon 78 casino Noocyadeeda kala duwan ee ciyaaraha ayaa loo qaybiyaa 10 bixiyeyaal software kala duwan Waxaad ka heli doontaa bixiyeyaasha waaweyn sida NetEnt, Microgaming iyo Ciyaar 'n Go. Laakiin sidoo kale waxaad ka heli doontaa bixiyeyaasha yaryar oo tiro badan; ELK Studios, Ciyaaraha Ciyaaraha, Endorphina en Pragmatic Play waa tusaalooyin tan.
Casino Avalon 78 live ka kooban yahay kulan ka Evolution Gaming en NetEnt Noolow Gaar ahaan, cayaaraha Evolution ayaa si ballaaran loo heli karaa waxaanan u maleyneynaa inay taasi tahay mid weyn. Waxaa jira noocyo kala duwan oo loogu talagalay qof walba oo jecel ciyaaraha tooska ah ee casino Roulette, Blackjack of Baccarat. Sidoo kale ciyaaro kale sida SIC Bo iyo ama Maareeyaha Kubadda Cagta sidoo kale waxaa laga heli karaa qamaarka tooska ah. Monopoly live ama DreamCatcher Avalon 78 Casino maya.
Wadarta xirmo gunno ah Avalon 78 Casino waxaa loo qaybin karaa 3 gunno oo kala duwan. Lacag bixin bilaash ah, gunno dhigasho iyo gunno toddobaadle ah.
Free dhigeeysa gunno
Isla marka aad iska qorto casino oo aad rabto inaad bilowdo ciyaar, waa inaad bilowdaa inaad lacag dhigato koontadaada. Isla marka aad tan ku sameyso markii ugu horreysay Avalon 78 oo aad dhigato ugu yaraan € 20, isla markiiba waxaa lagu siin doonaa 78 Free Spins. Waxaad kuheleysaa Kuwani Free Spins on the Afyare AVALON II Microgaming. Qosol laf ahaantiisa, laakiin waa inaad ku guuleysataa guulaha laga helayo gunnadan Free Spins bonus 50 jeer kahor intaadan bixin karin. Waxaan u maleyneynaa inay tani tahay xaalad xoogaa adag. Laakiin ka soo qaad inaad lacag badan ku qaadato wareegyadan bilaashka ah, markaa waa inaan kaa niyad jabnaa. Bixinta ugu badan ee Abaalmarinta Lacagta Bilaashka ah waa € 100.
Lacagta Debaajiga ah
Xaqiiqdii maahan gunno soo dhaweyn ah, laakiin aan ugu yeerno taas dartiis. Adiga 2e in 3e deebaaji aad ka heli Avalon 78 lacag gunno dheeraad ah on xisaabtaada. Waxaan si kooban kuugu taxnay:
1e deebaaji: 78 Lataliyihii Bilaashka ahaa ee AVALON II
Wager: 50x; Deebaajiga ugu yar: € 20; Waqtiga ugu badan: 14 maalmood; Bixinta ugu badan: € 100.
2e deebaaji: 50% gunno ilaa ugu badnaan € 100, -
Wager: 50x; Deebaajiga ugu yar: € 20; Waqtiga ugu badan: 14 maalmood.
3e deebaaji: 100% gunno ilaa ugu badnaan € 100.
Kahor inta aanad sharadyin gunooyinkaaga deebaajiga, waxaan kugula talineynaa inaad hubiso xaaladaha gunnada ee Avalon 78 Casino. Waxaa jira liis ballaaran oo ciyaaro ah oo aan tirin ama u xisaabtamaya boqolkiiba.
Ciyaartoyda lacagta badan eryanaya Avalon 78 casino waa mid sidoo kale gunnada cashback. Midkani sidoo kale wuu qalin jabiyaa oo wuxuu u eg yahay sidan:
Khasaaraha toddobaadlaha ah ee u dhexeeya € 1000 - € 1999: 7% Cashback (10x wagering)
Khasaaraha toddobaadlaha wuxuu ka sarreeyaa € 2000: 10% Cashback (10x wagering).
Marka waad soo ceshan kartaa lacagtan toddobaad kasta.
Ilaa € 250 oo gunno ah
Ilaa 7% Cashback!
Is Avalon 78 Casino casino lagu kalsoonaan karo?
Haddii ay tahay inaan ka jawaabno tan, waxaan marka hore eegaynaa liisanka khamaarka internetka. Avalon wuxuu ku shaqeeyaa liisanka N1 Interactive runtiina waa sumad cad oo isla shirkad ah. Waxaa jira dhowr casinos oo ku shaqeeya shatigan N1. Ka fikir Bob Casino, Spinia casino iyo dabcan N1 Casino is. Shatigu wuxuu ka yimid Malta, markaa taasi waa caadi. Ilaa inta aan ka walwalsanahay, Malta waa waddanka ay tahay inaad ka hesho shati lagu kalsoonaan karo.
Avalon 78 Casino wuxuu leeyahay wada hadal toos ah waxaadna u soo diri kartaa emayl. Tan dambe uma badna in wax badan la istcimaalo, marka la eego in sheekada tooska ah ee Avalon 78 ay u furan tahay maalinta oo dhan. Wadahadalka tooska ah ayaa la heli karaa 24/7.
Wax yar ayaa laga heli karaa casinokan khadka tooska ah. Taasi macno ayey leedahay, dabcan, maxaa yeelay Avalon 78 goor dhow ayuu albaabada furay. Waxaa jira wax laga heli karo oo ku saabsan casinos kale oo internetka ah oo ku shaqeeya shatiga, laakiin tani dhab ahaantii wax yar ayey ka sheegaysaa Avalon 78. Cabashooyinka si fiican ayaa loo xalliyaa, illaa inta aan ka akhrisan karno.
Waxay umuuqataa mid aad muhiim noogu ah inaan si taxaddar leh u aqrinno shuruudaha gunnada. Kuwani waxay ka socdaan Avalon 78 Casino aad u culus oo ah. Waxaan saadaalineynaa inay jiri doonaan cabashooyin dhowr ah oo kusaabsan mustaqbalka.
Miyaan dhigi karaa oo lacag kama dhigi karaa lacag si nabad ah?
Tani dhab ahaan waa suurtagal tan casino online, maxaa yeelay Avalon 78 ayaa ka mid ah kuwa yar casinos halkaas oo aad dhigato karaa iDeal. Waxaan u maleyneynaa wax weyn oo lagu daray! Haddii aadan rabin inaad dhigato iDeal, dabcan waad ku shubi kartaa lacag Trustly, Visa, Neteller, Skrill ama ikhtiyaarro kale. Waxaad ka heli kartaa dhammaan xulashooyinkaan liistadayada FAAHFAAHINTA CASINO.
Aad ugama qanacsaneyn tan waxaanan u maleyneynaa sidoo kale Avalon 78 Casino tani runti waa inay isbedeshaa. Dabcan wax walba waa aamin, laakiin waxaa jira xad xadidan oo ku saabsan bixintaingen. Waxaad bixin kartaa ugu badnaan € 1000 maalintii, ugu badnaan € 7500 asbuucii iyo ugu badnaan € 15.000 bishii. Haddii aad guuleysato wax intaa ka badan, waa inaad tan ku faafisaa dhowr bilood. Waxaan dhawaan u dirnay ciyaaryahan Lucky Days iyo yaa ku guuleystay 178.000 XNUMX Mega Fortune Dreams ugu dambayntii ka NetEnt. Wuxuu ku lahaa dhammaan lacagtii akoonkiisa toddobaad gudihiis. Tani waxay ahaan lahayd Avalon 78 Casino qaado waqti qosol badan!
Dhamaantiin, waxaan u maleyneynaa Avalon 78 Casino khamaar dhexdhexaad ah. Tani badanaa waxay sabab u tahay xadka lacag bixinta iyo xaaladaha gunnada. Marka la eego kalsoonida, amniga iyo xulashada ciyaarta, khamaaristani waa sax. Laakiin haddii aadan ahayn ciyaartoy gunno ah, oo aanad dhib ka qabin inaad sugto lacag aad u tiro badan, Avalon 78 waa kuu khamaar internet weyn kuu ah!
In ka badan Avalon 78 Casino
Lacagta Debaajiga ah, Gunnada Cashback, Lacagta Spins oo Bilaash ah
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan Avalon 78 Casino
Is Avalon 78 Casino lagu kalsoonaan karaa?
Khamaarka internetka wuxuu ku shaqeeyaa shati Malta. Tani waa bixiye liisan laysku halleyn karo. Waxaan sidoo kale eegeynaa qadka caawinta iyo cabashooyinka. Fiiri dib-u-eegistayada waxaadna ku soo gabagabeyn doontaa in Avalon 78 lagu kalsoonaan karo!
Maxaa gunooyin ah oo aan ka helayaa casaankan khadka tooska ah?
Waxaad ka helaysaa gunooyin badan halkan. Gunooyinka Cashback, Gunooyinka dhigaalka iyo Lacagta Lacagta Bilaashka ah. Laakiin shuruudaha halkan waa kuwo aad u adag. Ku eeg shuruudahan dib u eegistayada.
Miyaan ku shubi karaa Avalon 78 iDeal?
Haa! Waan ognahay inaysan ahayn (mar dambe) mid aad ugu badan adduunka casino adduunka, laakiin Avalon 78 waa mid ka mid ah naadiyada yaryar ee khadka tooska ah ee internetka ah ee aad weli lacag ku shubi karto koontadaada khamaarka iDeal!
Midkani Avalon 78 Casino dib u eegista waxaa qoray Nicky waxaana markii ugu dambeysay la baaray 02-03-2021.